Malunga nathi -Sichuan Aixiang Technology Co, Ltd.
About Birthday ententeni
Sichuan Aixiang Technology Co., Ltd. na ingcali bokukhanya-ubunzima isakhiwo yokwakha China, kunye brand ezimbini, Aixiang Agriculture and Happy Birthday kwesibingelelo phantsi uyinike igama likaThixo.
Le nkampani ibekwe e Chengdu, phezulu aluminiyamu umenzi intente kunye nokuthengiswa inkampani joint e Western China.
Thina abandakanyeke kuyilo & imveliso olunye-stop service case project, kunye neemveliso zethu nasemva-nkonzo zibonakaliswa yi naphi phesheya & abathengi zasekhaya. Thina 'uzinikezele ukubonelela nokuyila kakhulu kumuntu kanye wena nentente glamping, okwetyeli zodidi intente, kunye ihotele intente le ndawo intle, ukhenketho estate yokwenene, amashishini okutya lokuphola eziphilayo, ucwangciso uyilo lokusingqongileyo kunye nezinye iiyunithi ezifanelekileyo.
Sinokhetho olubanzi lweentente ezigcobisayo, ugcino lweentente ezitshisayo kulonyulo lwakho.
Kubathengi abafuna uyilo lwenkcubeko ephucukileyo, sinokunikezela ngeenkonzo eziphezulu zokugqibela.
Sinikezela uluhlu olupheleleyo lweenkonzo ukusuka kuyilo lweengcinga ukuya ekuphunyezweni kweprojekthi yeenkampu.
Turn-iqhosha Isicombululo ye Light-Weight Structure Zokwakha
Le nkampani iye izixhobo banamhla, uphando kunye nophuhliso olomeleleyo amandla kunye nolwakhiwo, iqela leengcali kudibene kunye neminyaka yamava zobugcisa. Sinikezela uyilo, imveliso, ufakelo, kunye neenkonzo yesondlo zonke iintlobo aluminium ingxubevange kunye ukukhanya-ubunzima izakhiwo iintsimbi.
I-Engineering and Technology iSebe ngoku abakhi ezimbini PRC Certified kwiklasi yokuqala, abakhi ezintathu PRC Certified udidi lwesibini, abayili abaphezulu asixhenxe kunye neentengiso elinesithandathu, lungabemi yimisebenzi kwiminyaka 5 kwaye ukubonelela design product zobungcali kunye nesisombululo yeprojekthi kubathengi ngokukhawuleza nangendlela efanelekileyo
Iinqobo Zethu: lokubulela, ukunyaniseka, umsebenzi, abanothando, co-operative
Birthday isibingelelo ubamba-bulumko ishishini ingqibelelo njengoko ingcambu, umgangatho uza kuqala, izinto ezintsha self-abaxhomekeke kunye sengqondo entsha emgangathweni zonke iinkcukacha yokusebenza, ngokubonelela imveliso iindleko-olusebenzayo inkonzo abathengi apha ekhaya nakumazwe aphesheya kunye nesimo sethu esitsha.
Thina nje kuphela ukunika inqanaba lenkonzo eyenza abathengi bethu bazive ngathi lwasebukhosini. Kusoloko sibamkela utyale yethu uphando umsebenzi-site, bamkelekile ukuba ukwakha ubuhlobo ishishini-iqabane kunye nathi.
Luxury Safari ententeni, Cotton Iseyile Bell esibingelelweni , yangaphandle intente , Safari ententeni Hotel, Safari ententeni, Hotel ententeni.